Madaxweyne Deni oo Mashaaric hormarineed dhagax dhigay – Radio Daljir
Abriil 6, 2019 1:55 g 0
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Boosaaso maanta ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo ay ka midyihiin xaafadda cusub oo lagu magacaabo Guryo-Samo, taasi oo loo dhisidoono si casri ah, dhismaha mashruuca ‘’XALKA WAARA’’ oo lagu dhisidoono 200 oo guri, taasi oo ay degidoonaan barakacayaasha magaalada Boosaaso iyo gobolka Bari oo dhan iyo dhagax dhigga Garoonka Kubadda Cabta Boosaaso.
Dhagax dhigga goobahani muhiim ka ah ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha Dowladda Puntland, maamulka Gobolka iyo kan degmada Boosaaso, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Puntland ayaa ugu horayn dhagax dhigay xaafad cusub oo loodhisidoono si casri ah, taasi oo lagu magacaabo Guryo-samo, waxaana hirgelinaya ganacsade reer Puntland ah, xaafaddan cusub oo sida qorsheheedu yahay loo dhammaystiridoono adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada ayaa Madaxweynaha Puntland cadeeyey in ka dowladda ahaan gacan ka gaysandoonto hirgelinta iyo dhammastirka mashruucani.
“Waa mashruuc muujinaaya horumarka, waxaan aad iyo aad u taageeridoonaa cid kasta oo dalkan maalgashata oo rabta inay horumariso, waxaan dhiiri gelinaynaa si guud iyo si shakhsiyaba ganacsatada Puntland, guryaha midbaan ka qadanayaa hadii Alle idmo Insha Alla”.
“Sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa dadku inay halkan soo degaan, waxaan farayaa oo ku adkaynayaa in Town Plan ka magaaladan cusub hadda la hagaajiyo si looga badbaado qorshe xumo dhacda” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa dhagax dhigay garoonka Kubadda Cagta Boosaaso, kaasi oo laga hirgelindoono koonfurta magaalada Boosaaso, dhismaha garoonka ayaa waxaa iska kaashan doona dowladda Puntland iyo shacabkeeda, waxaana uu Madaxweynuhu kula dardaarmay maamulka gobolka iyo kan degmadaba in la der-dargeliyo dhismaha garoonka, isla markaana loo dhiso si casri ah.
“Waxaan ku faraxsanahay in maanta garoonkan aan dhagax dhignay oo aan rajaynayno inuu noqdo mid bilicda magaalada waxbadan kusoo kordhiyo, waxaan uga mahadnaqaynaa jaamacadda Bariga Africa maadaama ay ku deeqday dhulkan, jaamacaduhu waa meelaha ugu fiican ee ay kasoo baxaan ciyaar-yahanadu, waxaan rajaynayaa garoonkani inuu noqdo meeshii ugu haboonayd ee ugu munaasibsanayd ee laga sameeyo, intii kasoo shaqaysayna aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.